Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #450
Waa la yaab leh in nin kale ayaa la hadlay oo ku saabsan arrintan weli.
Waxaan rakibay dhowr muuqaal add-ons Waxaan ka soo degsaday bartaan, iyadoo loo maleynaayo mid ama labadaba FSX iyo Prepar3D. Midkoodna muuqaalka muuqaalka kama muuqdo ciyaarta (yaasha) wax alla wixii ah. Diyaaradda add-ons wuu fiicanyahay, laakiin xiisahaas uma aanan helin kuwaas.
Waxaan sidoo kale soo bixi this muuqaal Hawaii, ku dhowaad 7 GB, iyo Kauai aad. Waxaan arkaa in ciyaarta oo dhan waa default muuqaalka xirka sida ka hor.
Maxay noqon karaan dhibaatada?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray StargateMax.
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #451
First of dhan, waxaan u maleynayaa in edeb leh, in la yidhaahdo hello.
Second, ha i idiinku Digi.
Saddexaad, info dheeraad ah.
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #452
1) Hello (xumahay)
2) Halkan waxaan ku leeyahay: Read 4 hoos.
4) Waayahay, jiheysteen Waxaan ahay, ma walwal ila, waxay u muuqataa sida aan labada tixgelin midba midka kale ku fiicnayn.
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #453
Waxaan u maleynayaa inaan ogahay Hawai'i mid aad ka hadlayso. Inkastoo ay ku rakibayso adiga MAYA waa inay ku darto ciyaarta, gacanta. Ma hubo WAA MAXAY Tani waa, laakiin mararka qaarkood taasi waa kiiska.
Haddii aad tahay qof hubin sida loo sameeyo lemme in la ogaado oo waxaan ya kaa caawin kara in
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #454
Aynu u samayn sidan oo kale ...
First, aad u leeyihiin in ay wax ka mid ah, ii sheeg ...
Ma si sax ah u rakibi?
Miyaad dhaqaajisay muuqaalka muuqaalkaaga FSX?
Waa kuwee muuqaal baakad inaad isku deyeyso inaad rakibi?
Waxaan lahaa wax badan oo muuqaal halkaan ka soo bixi, oo dhan waxaa ka mid ah uu ka shaqeeyo, haddii aad xaq u samayn.
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #457
Bal aan ka bilowno cusub, hab in uu dareensan yahay in wax badan ka fiican.
Sorry ku saabsan kor ku xusan.
Waxaan ku rakiban in vol weyn photoreal Hawaii 1-2-3 pack, Kauai, Mt. Everest, Fiji, jasiiradaha Balearic v2.
xidhaba ayaa sheegay in ay si toos ah rakibi doonaa oo aan qiyaasayo in ay ku tusi doonaa ilaa Library muuqaal ah.
wax cusub in Library Muuqaalka sheedda (labada kulan) waxaan ku arkay.
Markaasaan eegay Addon Faylka loo yaqaan 'Scenery folder' (labada ciyaar), mana jirin wax aan ku rakibay. Waxaan sidoo kale u maleynayay inay si gooni ah u rakiban yihiin, laakiin waan awoodi waayey inaan helo halkaan si aan gacan ugu daro.
Intii aan qorayay jawaabta halkan waxaan si lama filaan ah u helay nal nal yar. Waxaan eegay Muuqaalka (maaha "Addon") galka oo meel hoose aad ka baadhay, oo halkaas ka helay!
Waxaan u maleynayaa in lagu helay xalin. Waad ku mahadsan tahay u adkeystay aan dabeecad, waxaan si dhab ah waxaa ka murugoodo 2 maalmood ah dhibaato loogu la ka dib.
Waxaan rajaynayaa in this post caawisaa qof kasta oo kale, kuwaas oo la kulmi karaan dhibaato la mid ah aan ku sameeyey.
aad oo dhan ku mahadsan tahay!
Midkoodna mods muuqaallada muuqaallada kama muuqdaan FSX iyo P3D sano 3 3 bilood ka hor #464
Taasi waa wanaagsan.
Waxaan u lahaa wax la mid ah happening.Don't ogaato sababta, laakiin xidhaba waxa ay samaynayaan waxyaabo qaldan. Mid ka mid ah update habboon si dhab loo baahan yahay.
Wanaagsan inaad aragto in ay shaqeyneyso. Hadda waxaad heshay wakhti xigta marka wax aan shaqeyneynin, noo sheeg inta ugu badan ee suurtagal ah, taas oo naga caawin doonta dhammaan xallinta dhibaatada.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.400